Kahadalka maqaalka Nolosha
Waa wax lala yaabo in Martin Luther warqad u qoro saaxiibkiis Philip Melanchthon isagoo ku waaniyey: Dembiil oo dembiguna ha xoog badnaado, laakiin ka awood badan dembiga waa aaminkaaga Masiixa oo ku farax Masiixa inuu yahay denbi, wuu ka adkaaday dhimashada iyo adduunka. Jaleecada hore, dalabka wuxuu umuuqdaa mid cajiib ah. Si loo fahmo digniinta Luther, waxaan ubaahanahay inaan si dhow u eegno macnaha guud. Luther macnaheedu ma aha dembiga ...
Saynisyahannada bulshada ayaa adeegsada ereyo xiiso leh si ay u sharxaan waqtiga aan ku nool nahay. Waxaad u badan tahay inaad maqashay ereyada "premodern", "casri" ama "gadaal". Runtii, qaar baa u yeera waqtiga aan ku noolahay adduunyada dambe. Saynisyahannada bulshada ayaa waliba soo bandhigaya farsamooyin kala duwan oo loogu talagalay isgaadhsiinta wax ku oolka ah jiil kasta, ha ahaado "dhise", "boomer", "basters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" ...
Inta badan dadka ka weyn 50 sano waxay xasuusan doonaan Nikita Khrushchev. Wuxuu ahaa nin midab leh, dabeecad duufaantana leh, oo hogaamiya u ahaa Midowgii Soofiyeeti hore, oo kabihiisa ku garaacay goobta uu ku hadlayey Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale lagu yaqaanay sharraxaaddiisa in qofkii ugu horreeyay ee meel bannaanka jooga ah, cosmonaut ruush-ka Ruushka Yuri Gagarin "uu duulay laakiin meel aan Ilaah ku jirin". Dhanka Gagarin laftiisa ...
Intii uu noolaa dhulka, Ciise wuxuu soo jiitay indhaha dad badan oo muhiim ah. Mid ka mid ah dadkaas aadka loo xusuusto wuxuu ahaa Nikodemos. Wuxuu xubin ka ahaa Golaha Sare, koox ka mid ah culimada hogaamineysa oo iskutallaabta iskutallaabta ku qodbay Ciise iyo ka qayb qaadashada Roomanka. Nikodemos wuxuu xidhiidh aad u kala duwan la lahaa Badbaadiyeheenna - cilaaqaad gabi ahaanba isaga beddelay. Markii ugu horreysay ee uu la kulmay Ciise, wuu gudbay ...
Nin dhib badan ayaa iskutallaabta dusheeda loogu dilay meel ka baxsan Yeruusaalem dhexdeeda. Keligiis ma uusan aheyn. Kaliya isagu ma ahayn kii dhibbanaha ahaa oo keliya Yeruusaalem maalintaas gu'ga. “Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa,” ayuu qoray rasuul Bawlos (Gal 2,20:2,20), laakiin Bawlos kaliya maahan. Wuxuu Masiixu ku yidhi Masiixiyiin kale (Kolosay 6,4). “Waa nalagula aasay isaga,” ayuu warqad u qoray Romanka (Rooma). Waxa halkan ka socda ...